Solosaina | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Ahoana ny fomba hanesorana ny fikarohana Chrome: torolàlana sy toro-hevitra
Fantatry ny rehetra fa ny Internet ankehitriny dia mitondra fandrahonana maro ho an'ireo mpampiasa rafitra informatika maoderina. Avy any no misy viriosy sy kankana, keylogger sy dokam-barotra, mpitsikilo, ary koa ireo mpaka an-keriny browser. Amin'ny iray amin'ireo ...
Ahoana no hisafidianana laptop tsara, nefa matanjaka? Expert reviews
Ny solosaina finday tsy lafo dia konsep izay tsy manana fetra mazava sy mazava tsara, satria izay mpivarotra ao amin'ny magazay izay liana bebe kokoa amin'ny tombony azony dia hilaza fa ity no be indrindra ...
Virosy mpitrandraka: fomba fikarohana sy fanesorana
Olana sarotra ny fiarovana ny solosaina. Ary vitsy amin'ireo mpampiasa no afaka manome an'io dingana io amin'ny rafitra fiasan'izy ireo. Matetika dia misy toe-javatra izay iharan'ny virus ny solosaina. ...
AMD A8-6410 Processor: Specs sy Reviews
Ny AMD A8-6410 dia processeur quad-core natao manokana ho an'ny kahie momba ny teti-bola. Ny codename ho an'ity fitaovana ity dia Beema. Ny AMD A8-6410 CPU dia manana ireto toetra manaraka ireto: ny fonosana mafana dia omena 15 W, mivantana ...
Mamorona sy manamboatra ny mpizara "Minecraft": torolàlana tsikelikely
Ankehitriny maro ny mpankafy no liana amin'ny fametrahana ny mpizara "Minecraft", satria tsy ny olon-drehetra no mahavita azy io amin'ny voalohany. Eto no misy ny torolàlana amin'ny antsipiriany sy ireo olana manandanja indrindra miseho amin'ny ankamaroan'ny ...
Inona no atao hoe kodia sy famaritana? Ohatra. Fomba handikana sy hametahana ny fampahalalana nomerika, ny litera sy ny sary
Ny fiasan'ny solosaina elektronika ho an'ny fanodinana angona dia nanjary dingana iray lehibe amin'ny dingan'ny fanatsarana ny rafitra fanaraha-maso sy ny drafitra. Saingy ity fomba fanangonana sy fanodinana vaovao ity dia somary tsy mitovy amin'ny mahazatra, noho izany dia mila fanovana ...
Asus X200MA - Famerenana amin'ny antsipiriany
Diniho ny laptop maoderina antsoina hoe Asus X200M. Kely ity fitaovana ity ary maivana ihany koa. Araka ny toetra mampiavaka azy, ny fitaovana dia azo sokajina ho solosaina finday mamokatra. Fitaovana amin'ny Asus X200M ...
Boky maro samihafa ao amin'ny "GTA: San Andreas" eo amin'ny polisy
Ny filazana fa amin'ny lalao amin'ny andiany GTA ny polisy dia manome fahasahiranana be ho an'ny mpilalao dia ny tsy hiteny na inona na inona. Fehezin'ny polisy foana ny arabe rehetra, mitandrina ny filaminana izy ireo, ary raha ...
Sarin'ny Pirates Treasure: Cheats, Tolo-kevitra sy Fanaraha-maso
Ny tetikasa lalao sasany dia manomboka manintona ny sain'ny mpampiasa ny tambajotra sosialy. Amin'izao fotoana izao dia misy vitsivitsy ny fampiharana toy izany, ary indraindray sarotra ny manapa-kevitra hoe iza no hanombohana azy. Anio no hamakafaka ...
Ahoana ny fomba hanaovana fandrika ao amin'ny Minecraft ary inona no mety ho izy?
Mpilalao maro no tsy mahatakatra izay fandrika ao amin'ny Minecraft. Mikaroka ireo resipeo rehetra misy izy ireo, nefa tsy mahita na inona na inona karazana. Raha ny marina dia tsy misy hita. Rehefa dinihina tokoa, ny vela-pandrika ...
Ahoana raha mila: ahoana no hampifandraisana ny solosaina finday amin'ny solosaina finday, ary tsy hoe ...
Mampiseho ny fampiharana fa ny mety hisian'ny fampifandraisana ny kapila mafy amin'ny iray amin'ireo solo-sainanao amin'ny solosaina finday na ny fahatsapana ilay toe-javatra mifanohitra mifanohitra dia avo lenta. Ny ohatra alohan'ity dia mety ho tampoka na voajanahary ...
Ahoana no ahodinako ireo zavatra ao amin'ny The Sims 4? Ahoana no ahodinako zavatra ao amin'ny The Sims 4?
Tsy azo inoana fa izao ianao dia afaka mahita olona izay tsy hahafantatra izay asehon'ilay lalao amin'ny andiany "Sims". Ity dia simulator fiainana iray izay mamela anao hanandrana ny andraikitry ny olona iray hafa, miaina ho an'ny ...
Witcher 3: fehezan-dalàna, famoahana daty
Ny Poloney avy amin'ny CD Project dia mankafy fahatokisan-tena lehibe eo amin'ireo mpilalao erak'izao tontolo izao, izay tsy azon'ny orinasa rehetra. Androany, ao amin'ny tsinay ny studio, eo am-piomanana tanteraka ny asa amin'ny tapany farany amin'ny tantara ...
Aiza no mihady fanangonana ao amin'ny Zombie Farm? Zombie Farm: Fanangonana sekoly
Vao haingana izay, nanjary nalaza be ny lalao informatika miorina amin'ny tambajotra sosialy. Midika izany fa tsy mitaky ny fisintomana ny mpanjifa izy ireo, fa ny fisoratana anarana amin'ny tambajotra sosialy, izay ahafahanao ...
Andalan-tsoratra "Elimination" ao amin'ny "Warface": toro-hevitra, tsiambaratelo
Ny lalao informatika marobe dia matetika tsy manana teti-dratsy, mikendry indrindra ny fanahin'ny ekipa, ny toetran'ny fiarahamonina miaraka amin'ireo mpiray dina aminy sy ny fifandrafiana amin'ireo mpanohitra. Noho izany, amin'ny lafiny maro, ny lalao toy izany dia manonitra ...
Ny rootkit dia ... Fandaharana manala rootkit. Kaspersky Anti-Virus
Ny virus virus dia azo antsoina hoe programa miasa mangingina ary manimba ny rafitra iray manontolo na ny ampahany manokana aminy. Ny programmer faharoa dia niatrika an'io olana io. Tsy misy sisa ...
Ahoana ny fomba hanaovana ny Yandex ho motera fikarohana?
Amin'ny dingana voalohany amin'ny fifehezana ny "science science" dia sarotra be ho an'ny mpampiasa vao manomboka. Na izany aza, be dia be ny zava-baovao ... Toy ny fitsipika, ny vao manomboka mampiasa ny Internet Explorer tafiditra ao anatin'ny rafitra fiasa. Nanomboka tamin'izay fotoana izay ...
Repeaters in Minecraft: famoronana sy fampiasana
Ny mpilalao novice dia mety tsy mahafantatra an'io, fa ny Minecraft dia manana rafitra maro isan-karazany, izay samy tsy manam-paharoa ary samy manana ny asany avy. Ankoatr'izay, mekanisma maro no ampiasaina fa tsy ...
Tahaka ny ao amin'ny "Opera" hanova ny pejy fanombohana. Opera Home Page
Aorian'ny fanokafana browser, ny zavatra voalohany hitan'ny mpampiasa dia ny pejy fanombohana. Ny adiresy dia voasoratra ao amin'ny sehatra. Ny programa rehetra natao hijerena ireo tranonkala Internet dia manana asa tahaka izany. Izany dia natao indrindra hanamorana ny fahafahan'ny mpampiasa. ...
What is a ICQ number: from registration to communication
Amin'izao androntsika izao, ny rafitry ny serasera dia mivoatra haingana be - sarotra ny maminavina hoe iza amin'ireo fitaovam-pifandraisana amin'ny Internet no ilaina, ohatra, ao anatin'ny herintaona. Nisy zavatra nitovizany tamin'ny ICQ - indray mandeha ...
65 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,060.